Etu esi ebubata ngwaahịa na PrestaShop n'ụzọ dị mfe | ECommerce ozi ọma
Dị ka ị maara, PrestaShop Ọ bụ ngwa ECommerce dị irè iji bulie ahịa gị, yana ọfụma iji.
Mana ịnwa bulite ngwaahịa na-abụ ihe mgbagwoju anya oge ụfọdụ, yana karịa mgbe a bịara n'ịbugote katalọgụ nke ngwaahịa, yabụ n'okpuru anyị ga-akọwa etu bubata ngwaahịa na PrestaShop.
1 Ndụmọdụ dị mkpa iji bubata ngwaahịa na PrestaShop:
2 Ntuziaka ibubata ngwaahịa na PrestaShop
2.1 Mepee CSV faịlụ
2.2 Etu esi edejuputa ederede CSV maka ngwaahịa PrestaShop
2.3 Ihe bara uru maka ndị na-ebu ozi na mbupụ mba ụwa.
3 Chekwaa CSV ndebiri
4 Na-ebugote template na ngwaahịa na PrestaShop
Ndụmọdụ dị mkpa iji bubata ngwaahịa na PrestaShop:
Mepụta edemede anyị chọrọ tupu ịmalite bubata ngwaahịa na PrestaShop.
Download ihe atụ nke a CSV faịlụ tupu ejuputa ya dika nhazi usoro na-agbanwe. Nwere ike ịchọta ihe atụ site na ịpị Backoffice / Nkeji di elu / Bubata nhọrọ CSV.
Gbalịa ịzọpụta CSV na ya ziri ezi Ọkpụkpọ.
Akwadoro ka onyonyo obula buru ibu kariri 500 kb ma buru ibu karie 70cm x 70cm.
Ihe oyiyi ndị ịchọrọ ịgbakwunye ga-abụrịrị echekwa aha ziri ezi, na-enweghị itinye oghere na usoro .jpg o .png.
Gbalịa iwebata otu ngwaahịa iji hụ ihe ọ na-arụ ọrụ yana ihe ị ga-agbazi.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibubata ngwaahịa na PrestaShop 1.7 ngwa ngwa na mfe.
Ntuziaka ibubata ngwaahịa na PrestaShop
Mepee CSV faịlụ
Anyị ga-ebu ụzọ mepee faịlụ ahụ nke anyị ndebiri nke anyị ga-ejupụta. A ghaghị ibudata ya dịka akọwara na nzọụkwụ gara aga.
Mgbe anyị na-emeghe .CSV faịlụ Site na mmemme Office, Excel ga-egosi anyị ozi njehie. Ihe anyị ga-aza dị ka ndị a:
Na ozi izizi anyị pịrị “Ee”.
Na ozi nke abụọ anyị pịa "Mba".
N'ozi ikpeazụ, pịa na nhọrọ "Nabata".
Etu esi edejuputa ederede CSV maka ngwaahịa PrestaShop
Na spain "A", Bụ nke ID, nke ga-abụ akara njirimara nke ngwaahịa ọ bụla. Anyị nwere ike ịhapụ kọlụm a anaghị ejupụta, n'ụzọ dị otú a a ga-emepụta ID na-akpaghị aka. Yabụ ọdịnaya nke kọlụm a bụ nhọrọ.
Na spain "B”: Na-arụ ọrụ: (0 = NO; 1 = EE) Site na ndabara, ekwesịrị ịtọ ya na 1 ka ngwaahịa ahụ wee pụta na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ọ bụrụ na abanyela 0, ngwaahịa agaghịzi ahụ anya.
Na spain "C”: Unique aha nke ngwaahịa
Na spain "D”: Aha nke edemede nke ngwaahịa a ga - aputa n’ime PrestaShop. Anyị na-akwado itinye NJ nke otu a ka ị mee ya ngwa ngwa yana enweghị mperi. Nwere ike ịgụnye ọtụtụ edemede kewara site na otu rikoma, ikwesighi iji oghere n’etiti ha.
Na spain "E": Ọnụahịa ahụ na-agụnyeghị VAT: Ebe ọ bụ na a ga-atụ ụtụ isi na kọlụm na-esote.
Na spain "F”: Iwu ụtụ, setịpụrụ ebe a ego ole a ga-akwụ maka ihe ọ bụla.
Na spain "G”: Kọlụm a bụ nhọrọ, ebe ị nwere ike ịgụnye Ahịa Ahịa.
Na spain "H": Na nke a ị ga - ede ma ọ bụrụ na ngwaahịa a na - ere dị ire ma ọ bụ na ọ bụghị, yabụ ị ga - ede (0 = NO; 1 = EE) ka ihe gị wee pụta na mgbasa ozi ire ere.
Na spain "I": Uru nke mbelata ngwaahịa ndị a ewebiri. Ọ kwesịrị imelite na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na pasent abanyela na kọlụm ọzọ.
Na spain "J”: Pasent nke ego a ga-etinye na ngụkọta uru nke ihe ahụ.
The ogidi "K"Ma"L": Ndị a guzobere oge nke Ego a na-ekwu okwu ga-adị ire, na-ekenye ụbọchị mmalite na kọlụm (K) na ụbọchị njedebe nke nkwalite ahụ (L), ị ga-etinyerịrị ya na usoro ahụ YYYY-MM-DD. Hapụ ya ka ọ tọgbọ chakoo ma ọ bụrụ na ihe anaghị ere ere.
Na spain "M": Nọmba ntụgharị
Na spain "N”: Nọmba ntinye aka nke ndị na-ebunye ya
The ogidi "O"Ma"P": E kenyere ndị na-eweta ọrụ na (OR) na onye nrụpụta na kọlụm (P): Kọlụm ga-ejupụta na ID nke onye na-ebu ngwaahịa ma ọ bụ onye na-emepụta ihe.
Na spain "Q”: Nọmba EAN-13 etinye na kọlụm a: Nke a bụ nọmba akara, nke mejupụtara nọmba 13, nke ejiri amata ihe.
Na spain "R”: UPC: Nke dị ka EAN-13 na North America, ọ gụnyere akara ngosi, nke anaghị ahụkarị na Spain.
Na spain "S”: Nke a bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ụtụ isi, ị nwere ike ịhapụ ya oghere.
The ogidi "T","U","V"Ma"W”: Nke etinyere nha nke ihe a na-ekwu, Obosara na kọlụm (T), Elu na (U), Omimi na (V) na Ibu na kọlụm (W):
Ihe bara uru maka ndị na-ebu ozi na mbupụ mba ụwa.
Na spain "X”: Ọnụ ego nke ngwaahịa ndị anyị nwere na Ngwaahịa nke ngwaahịa ahụ. Kọlụm amanyere bụ iwu.
Na spain "Y”: Opekempe ibu: Opekempe ibu nke ngwaahịa maka ire ere. Tinye 1 na ndabara.
Na spain "Z": Site na ndabara hapụ kọlụm efu.
Na spain "AA”: Agbakwunyere na-eri ka e boro maka ụfọdụ ngwaahịa
Na spain "AB”: Nkeji nke ngwaahịa ọdịnaya
Na spain "AC”: Ahịa maka otu ọ bụla.
Na spain "AD”: Short nkọwa nke ngwaahịa.
Na spain "AE”: Nwekwuo nkọwa zuru ezu banyere ngwaahịa a.
Na spain "AF": Ọ bụ banyere itinye mkpụrụokwu nke ha nwere ike iji chọọ ngwaahịa a. Mkpado nke ha nwere ike zoo isiokwu.
The ogidi "AG","AH"Y"AI”: Meta-aha na kọlụm (AG), Meta-keywords na kọlụm (AH) na Meta-nkọwa na kọlụm (AI): Ala a bụ idobe ngwaahịa ndị ahụ na igwe nchọgharị Intaneti. Dejupụta ederede banyere ngwaahịa a.
Na spain "AJ”: Ha na-akpaghị aka site na ngwaahịa aha kewapụrụ site hyphens. A na-atụ aro ka ị ghara ịgbanwe ihe ọ bụla na nke a.
Na spain "AK”: Ederede maka mgbe ọ dị.
Na spain "AL": Ederede maka backorder
Na spain "AM”: Nnweta maka mbupu (0 = NO; 1 = EE)
The ogidi "AN"Ma"AO”: Ngwa okike na nnweta ụbọchị, na-ahapụkarị oghere.
Na spain "AP": Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka ọnụahịa ahụ pụta, ị ga-ederịrị 1, ọ bụrụ na ịchọghị ka ọnụahịa ahụ gosi, dee 0.
Na spain "AQ”: Njikọ ihe oyiyi nke ịchọrọ ịgụnye maka ngwaahịa a. Nwere ike ịgụnye ọtụtụ onyonyo kewara site na otu rikoma, na-enweghị oghere. Iji mee ka ha pụta na faịlụ CSV, anyị ga-ede ha dị ka usoro nke ihe atụ a: ./bulite/DSCF1940.jpg
Na spain "AR”: Hichapụ ihe oyiyi dị na mbụ na isiokwu ahụ (0 = NO; 1 = EE)
Na spain "AS”: Njirimara nke ga-ekewapụ site na commas ma ọ bụghị site na oghere.
Na spain "AT”: A ga-ede ya ma ọ bụrụ na ederede dị naanị na ntanetị (0 = NO; 1 = EE).
Na spain "AU”: Ọnọdụ ngwaahịa: Na nke ị ga-egosi ma ọ bụrụ na ngwaahịa a dị NEW, USED or RECYCLED, Nhọrọ kọlụm.
Na spain "AV": Iji gosi ma ọ bụrụ na ederede ederede ma ọ bụ na ọ bụghị, yabụ ị ga - egosi 1 ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịhazi ya ma ọ bụ" 0 "ma ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ adịghị edozi. Ahapụ efu ma ọ bụrụ na ngwaahịa na-adịghị customizable. Ọ bụrụ na ngwaahịa a na-edozi, a ga-egosipụta igbe ederede na faịlụ ngwaahịa ka onye ahịa wee mejupụta ya.
Na spain "AW”: Mgbakwunye faịlụ (0 = Mba, 1 = Ee)
Na spain "AX": Ejiri" 1 "gosi ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ igosi mpaghara ederede ka onye ahịa nwee ike ide anyị ma ọ bụ" 0 "ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịnata ụdị nkọwa ọ bụla.
Na spain "AY”: Kanye akara“ 1 ”iji kwe ka iwu, ọbụlagodi na enweghị Stock, ma ọ bụ akara 0 ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịhapụ ha ịtụ ma ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ adịkwaghị na ngwaahịa.
Na spain "AZ”: Aha nke ụlọ ahịa ma ọ bụ ika.
Ozugbo ị mechara mejupụta ozi dị na kọlụm, anyị ga-echekwa faịlụ ahụ.
Chekwaa CSV ndebiri
Na ịpị floppy iji chekwaa faịlụ ahụ.CSV N'ime ihe omume Excel anyị ga-achọta ozi Na ozi izizi anyị na-aza "Ee", na ozi nke abụọ anyị na-aza "Mba".
Na-ebugote template na ngwaahịa na PrestaShop
Ozugbo anyị mechara usoro ndị gara aga iji mejupụta ndebiri ahụ kpamkpam, anyị gafere ibubata ihe ngwaahịa na PrestaShop.
Usoro ahụ n'onwe ya na-enye anyị nhọrọ a na ngalaba:
Katalọgụ wee pịa n'akụkụ aka nri nke nwere ozi: Bubata ngwaahịa na PrestaShop
Họrọ ụdị nke .CSV faịlụ ka itinye. N'okwu a, ngwaahịa ndị ị jupụtala
Bulite faịlụ ahụ na kọmputa anyị na-achọ ya na folda echekwara.
Asụsụ nke a ga-etinye katalọgụ ahụ.
Họrọ nhazi nke faịlụ bulite. Site na ndabara hapụ ndabara, na .CSV faịlụ.
Pịa na ibubata data CSV.
Site na usoro ndị a, nke ga-ewe gị oge na nraranye na mbido, ịnwere ike bulite ọtụtụ isiokwu n'otu oge ahụ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka ihe na-agwụ ike mgbe ịmalite ịme ya, mgbe ahụ ị ga-amalite iji ya mara sistemụ na ụzọ ọ na-arụ ọrụ.
Will ga-amata na ọ gbasara tebụl dị mfe, nke ga - enyere gị aka ijikwa ọtụtụ ozi ngwa ngwa, ebe ọ bụ na ngwa ọrụ a nwere ike iyi ihe mgbagwoju anya na mbụ, mana ọ ga - enye gị uru nhazi mgbe ị na-ebugote katalọgụ ngwaahịa gị na ire ahịa ha n'ịntanetị na-erute na ọtụtụ ndị ahịa gburugburu ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Etu esi ebubata ngwaahịa na PrestaShop
Ezigbo ederede. Enwere m obi abụọ ụfọdụ.
Enwetara m ụfọdụ isiokwu na njikọta na onyonyo ha kwekọrọ, site na njikọta.
N'oge a na-edegharị isiokwu ndị ahụ (n'ihi ọbịbịa nke ndị nnọchi ọhụrụ), ọ dị mkpa itinye ID nke isiokwu ahụ ka ọ bụ na ntụnye ya bara uru? (Enweela m ntụle nke isiokwu ahụ dị ka NJ ya, na-ekweghị ka Prestashop mee ya na akpaghị aka, amaghị m ma ọ ga-enye nsogbu ma ọ bụrụ na ndị nrụpụta dị iche iche jiri otu ntụaka dị n'ime ngwaahịa ha)
O meela m na emeela m otu a ma ugbu a enwere m eg 1 S Orange, 3 S Orange, 1 M Oroma, 3 M Oroma… ya bụ, a na-agbakwunye njikọta ọhụrụ, kama ịtinye.
Nsogbu ọzọ na onyonyo a, ọ bụrụ na nha S, M, L, XL nke agba mmanụ nwere otu onyonyo ahụ (otu site n'ihu, otu site n'akụkụ, otu site na azụ) maka nha anọ, enwere m ihe oyiyi 12 kwa agba . Ọ bụrụ na m nwere agba 6, enwere m ihe oyiyi 74.